Xog ku saabsan lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xog ku saabsan lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Haweeney ganacsatada Dahabka kamid ah ayaa la ogaadey inay leedahay Lacagta oo cadadkeeda lagu qiyaasay illaa hal milyan oo dollar.
MUQDISHO, Soomaaliya - 18-kii bishan, booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay inuu Garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qabtay Lacag badan oo ku jirtay boorsooyinka, taasoo ka timid dalka Kenya.
Su'aallo badan ayay dadka iska waydiinayeen cida leh lacagta iyo sababta dalka lagu soo geliyay, waxaana illaa hadda booliska bixin fahfaahin dheeraad ah oo arrimaha lacagta ku saabsan.
Keydmedia Online ayaa baaritaan kadib ogaatey in lacagta ay leedahay haweenay lagu magacaabo Saabiriin C/qaadir Isxaaq oo ka ganacsata Dahabka Suuqa Bakaaraha iyo Nairobi xaruuumo ku leh, waxaana ay usoo dhiibtay nin gacan-yare u ah, oo boorsooyin kusoo qaaday.
Dowladda Farmaajo ayaa markii ay qabatay lacagta siyaasadeysay, iyadoo ku sheegtay inay ahayd lacag ku socotay Mucaaradka ku sugan Muqdisho, kana timid dowladda Kenya oo khilaaf kala dhaxeeya xiligan.
Haweenayda leh lacagtan ayaa maalin kadib markii lacagta la qabtay si deg deg ah ku timid Muqdisho, waxayna gashay Xabsi kadib markii NISA ay diiday in lacagteeda dib loogu celiyo, waxaana lagu hayaa xarunta CID-da mudo lix maalin iyada iyo ganac-yaraheeda lacagta wadey.
Odayaasha dhaqanka Beesha Ganadha ka dhalatay ayaa shir isagu yimid Muqdisho maalin kahor, waxayna ka codsadeen Farmaajo inuu haweenayda xorriyadeeda dib ugu soo celiyo, islamarkaana lacageeda ku wareejiyo, hadii dowladnimo jirto, oo la dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo hantidiisa.
Dowladda waxay ku fashilantay inay hubiyo lacagta la qabtay kahor inta aysan kula ordin saxaafadda oo laga been sheegin cid leh iyo ujeedka dalka kusoo gashay, oo ka duwan sida ay Booliska sheegeen oo ahayd in diyaarad ka timid Kenya keentay, kuna sii jeeday mucaaradka Farmaajo.
Lama oga in NISA ay lacagtan iyadoo dhameytiran ku wareejin doonto gabadha leh. Bishii April 2018, dowladda Soomaaliya ayaa Garoonka Muqdisho ku qabatay $9.6 milyan oo ka timid Imaaraadka, taasoo loo wadey in lagu bixiyo mushaarka askarta Imaaraakda tababaray.
Qabashadda lacagta ayaa timid waxyar kadib markii Imaaraadka laga erayay Soomaaliya, oo dowladda Farmaajo la safatay Qatar oo hadda saameyn siyaasadeed ku leh Muqdisho, maadaama u fadhiyo Villa Somalia ninka u shaqeeya ee Fahad Yaasin.